Dibadbax looga soo horjeedo sheegashada Kenya ee Baddeena oo ka socota Muqdisho oo la fillaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 21 September 2016
Dibadbax lagu taageerayo dadaalka dowladda Federaalka ee ku wajahan dacwadda ka socota maxkamadda caddaalada adduunta ee ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta lagu wadaa in uu ka dhaco magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa Radiyaha u sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu wado qaban qaabada dibad bax balaaran oo looga soo horjeedo sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya islamarkaana lagu taageerayo dadaallada dowladda iyo dacwada ku saabsan badda ee iminka ka socota maxkamada cadaalada adduunka ee dalka Holand.
Wuxuu intaasi ku daray in dibadbaxaasi ay ka qeyb qaadan doonaan kumanaan dadweyne ah oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasoo socod ku maraya waddooyinka waaweyn ee magaalada, iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan sheegashada Kenya ee baddeena Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa sheegay in ammaanka caasimada si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamo aad u geeyfan la soo dhigay waddooyinka waaweeyn ee magaalada Muqdisho.